မြန်မာနိုင်ငံ | မြန်မာနိုင်ငံ ရှိ မှ အုပ်ချုပ်မှု နှင့် ရုံးပိုင်းဆိုင်ရာ အလုပ်အကိုင်များ | MyJobs
Result page 1 for မြန်မာနိုင်ငံ ရှိ မှ အုပ်ချုပ်မှု နှင့် ရုံးပိုင်းဆိုင်ရာ အလုပ်အကိုင်များ
Admin Assistant (Eastern Foundation Co.,Ltd)
5.5 daysaweek. Stay near Mayangone Township.
အုပ်ချုပ်မှု နှင့် ရုံးပိုင်းဆိုင်ရာ အလုပ်အကိုင်များ 32
ကြော်ငြာ ၊ မီဒီယာနှင့် ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း 1 စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း၊ ငါးလုပ်ငန်းနှင့် သစ်တောလုပ်ငန်း7ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း6စွမ်းအင်လုပ်ငန်း 1 နည်းပညာနှင့် ဆက်သွယ်‌ရေးလုပ်ငန်း3ကုန်ထုတ်လုပ်မှုနှင့် သိုလှောင်လုပ်ငန်း7အစိုးရမဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်း2လက်လီးအရောင်း /အ၀ယ်လုပ်ငန်း၊ ဖက်ရှင် နှင့် လူသုံးကုန် စားသောက်ကုန်လုပ်ငန်း 1 သင်္ဘောလိုင်းနှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်း 4
မန္တလေး 1 ရန်ကုန် 24 မြန်မာပြည်အတွင်း5နိုင်ငံခြား 2
စာချုပ်ဖြင့်လုပ်ကိုင်နိုင်သေ 1 အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား 31